Kuramwa Mabasa kweVashandi veHurumende Kunopinda Muzuva Repiri
Ndira 24, 2012
Kuramwa mabasa kwevashandi vehurumende kwapinda muzuva rechipiri.
Vamwe vevashandi ava vanga vakapakata zvinyorwa, varatidzira pamahofisi ehurumende eKaguvi neMakombe muHarare, vachikurudzira vamwe vavo vasiri kuramwa mabasa kuti vabatane navo, uye kuti vakuru-vakuru muhurumende vanonzi vari kutyisidzira vashandi, vasiyane netsika iyi.
Kuratidzira uku, uko kuri kuitwa kuchitungamirwa nekomiti huru yemubatanidzwa wesangano anomirira vashandi vehurumende, yeApex Council, kunonzi kwaitwa kwemaawa mana, paine vashandi vashoma vabatana nevamwe vanga vachiratidzira.
Vashandi vemumahofisi vakawanda vanonzi havasi kupinda mukuramwa mabasa pamwe nevamwe vavo, zvikuru varairidzi, avo vanonzi vakabatana rwendo rwuno mukuratidzira.
Vashandi ava vakamboramwa zvakare basa kwezuva rimwe chete svondo rapera.
NeChitatu, pari kutarisirwa kuitwa musangano pakati pevamiriri vehurumende nevamiriri vevashandi.
Mumwe wevatungamiri veApex Council, uye vari Chief Executive Officer weZimta, VaSifiso Ndlovu, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vazhinji vasina kubatana navo mukuratidzira uku, vanovimba kuti vanzwa shoko ravo rekuti vashande pamwe sevashandi vehurumende.
Mutevedzeri wemunyori mukuru musangano rePublic Services Association, VaJeremiah Bvirindi, vatiwo kuramwa mabasa kuri kuitwa nevashandi vehurumende uku kwabudirira zvikuru muzuva repiri iri.
Ukuwo Apex Council yazivisa kuti ichambomisa kuramwa mabasa neChitatu kuitira kuti ipe mukana nhaurirano dzavachaita nehurumende. Nhaurirano dzemihoro idzi dzichaitwa pasi peboka reNational Joint Negotiating Council.
Sachigaro veApex Council, Amai Tendai Chikowore, vanoti danho iri ratorwa mushure memusangano wavaita zvichitevera tsamba yavakawana kubva kugurukota rezvevashandi vehurumende, Amai Lucia Matibenga, yekuti hurumende yave nehurongwa pamusoro pemihoro pamwe namashandiro avo.
Izvi zvinotarisirwa kuturwa pamusangano uyu. Amai Chikowore vanoti kana vakasawirirana pamusangano uyu vanobva vaenderera mberi nekuramwa mabasa.
Vati vachazogara pasi kuti vaone kuti vofamba sei nemusi weChishanu.
Apex Council yakakurudzira kuti nhengo dzayo dziramwe mabasa kutanga neMuvhuro kwesvondo rose.
Vashandi vari kuda kuti mushandi anotambiriswa mari yepasi pasi, ange achitambira mari inotangira pamazana mashanu nemakumi matatu nemasere emadhora pamwedzi.
Zvichakadai, bato reMDC 99 rinoti rinotsigira kuramwa mabasa uku.
Mutungamiriri webato iri, VaJob Sikhala, vaudza vatori venhau kuti vashandi ava vanofanira kuwedzera moto zvekutotandanisa hurumende yaVaMugabe pachigaro.
Vashorawo mutauriri waVaMugabe, VaGeorge Charamba, nemashoko avakaburitsa mubepanhau reThe Herald, neZimbabwe Broadcasting Corporation, ekuti mutungamiri wenyika ari kushushikina nenyaya yevashandi vehurumende uye anoda kuti igadziriswe nekukasika.
VaSikhala vati bato raVaMugabe reZanu PF rinozivikanwa nenyaya yekushaya hany’a pamwe nekushungurudza vashandi vehurumende vakaita sevarairidzi kubva muna 1980.
Vatiwo gurukota rezvevashandi vehurumende, Amai Lucia Matibenga, ngarisiyane nekatsika karo kekuramba kutaura nevatori venhau pamwe nekupikisana nevamwe vamiriri vemasangano evashandi sezvo basa ravo riri rekugadzirisa nyaya dzevashandi pamwe nekuudza veruzhinji matanho avari kutora mukugadzarisa nyaya iyi.
Hurukuro naVaJeremiah Bvirindi